IKenya Airways isayina isivumelwano sokwabelana ngekhowudi kunye neCongo Airways
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » IKenya Airways isayina isivumelwano sokwabelana ngekhowudi kunye neCongo Airways
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zase-DR Congo • Iindaba zikaRhulumente • IKenya Breaking News • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Intetho yezoKhenketho • uthutho • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Amaqabane eKenya Airways kunye neCongo Airways kwiindiza zaseAfrika
IKenya Airways kunye neCongo Airways zabelana ngeendlela zomoya zaseAfrika
Isivumelwano sityikitywe kade kwiveki ephelileyo
Abathengi baseKenya Airways ngoku banokufikelela kwikomkhulu laseCongo laseKinshasa ngqo bevela eNairobi
Ngenjongo yokwandisa iinqwelomoya zayo ukuya kwizixeko ezininzi zaseAfrika, I-Kenya Airways ibisebenzisana nayo ICongo Airways ukujonga ezinye iindlela kunye neendawo eAfrika ngesivumelwano sokwenza iikhowudi.
Isivumelwano sokwabelana ngemizila yomoya e-Afrika senziwe ngelixa uMongameli wase-Kenya u-Uhuru Kenyatta etyelele iDemocratic Republic of Congo (i-DRC) emva koko wabamba iingxoxo zamazwe amabini noMongameli Félix Tshisekedi kwiveki ephelileyo.
Isivumelwano, esatyikitywa kade kwiveki ephelileyo siya kwenza kube lula kwi I-Kenya Airways abathengi ukufikelela kwikomkhulu laseCongo laseKinshasa ngokuthe ngqo ukusuka eNairobi emva koko babhabhe baye kwezinye iindlela zaseAfrika nakwamanye amazwe ngokudibeneyo.
Ngaphantsi kwalolu lungiselelo, iKenya Airways iza kuba nakho ukuthengisa izihlalo ezininzi ekwabelaneni ngeCongo Airways, emva koko yandise amaphiko ayo ukugubungela uthungelwano lwenqwelomoya e-Afrika nangaphandle kwelizwekazi lase-Afrika, ngelixa ibonelela ngogcino lwayo lwentengiso kunye neemarike kumazwe abasebenza kuwo.
Isivumelwano sobambiswano satyikitywa liGosa eliyiNtloko le-Kenya Airways Group (i-CEO) u-Allan Kilavuka kunye ne-CEO ye-Airways yeCongo uMnu u-Desire Balazire Bantu, isitatimende esivela eNairobi.
Isivumelwano sityikitywe eKinshasa ngomhla wokugqibela wotyelelo lukaMongameli u-Uhuru Kenyatta lweentsuku ezintathu eCongo kwaye luqwalasele amaqabane eenqwelomoya amabini aseAfrika kugcino lwazo ngaphandle kweekhowudi.
Iinqwelomoya zimbini zavuma ukusebenzisana kuqeqesho kunye nokwabelana kwabakhweli abagqithisileyo kunye nemithwalo.
Emva kokuphinda aqale umlo wamanye amazwe kunyaka ophelileyo emva kweenyanga ezintandathu zezithintelo zokuhamba ze-COVID-19, iKenya Airways irhoxise iinqwelomoya zayo ezigubungela iidolophu ezininzi e-Afrika.
IKenya Airways ubukhulu becala ibhabha kubakhenkethi ababhukishe ukuba batyelele amazwe angamalungu eMpuma Afrika (EAC) eTanzania, Uganda, Rwanda, Burundi kunye neCongo.
Iinqwelomoya zihamba ngenqwelomoya ngeenqwelomoya eziya eNairobi ukuya kwizixeko eziphambili zaseAfrika ngelixa ibonelela ngonxibelelwano oluya eYurophu, Middle East naku Mzantsi Mpuma Asia.